Ogaden News Agency (ONA) – Xoghayaha Guud OYSU oo kulan la yeeshay Jaaliyada Sweden iyo OYSU Sweden
Xoghayaha Guud OYSU oo kulan la yeeshay Jaaliyada Sweden iyo OYSU Sweden
Posted by ONA Admin	/ February 26, 2012
OYSU Sweden faraca Stockholm oo isugu yimid kulan xambarsanaa dhisid urur cusub oo kamida urur hoosaadyada ka hawl gala dalka Sweden & kulan muhiim ahaa oo lagu macsalamaynayay Xog Hahaya guud ee OYSU Mudane Mujahid Sh. Ibraahin ayaa ugu horaynba lagu furay aayadaha quraanka kariimka kadibna loowada sara kacay heesta calanka. Shirka oo ay u dhanaayeen dhamaan qaybaha jaaliyada ayka koobantahay, sida ururka hooyoyinka, ururka OYSU & walibana jaaliyada guud ayuu furay Xog-Hayaha Ururka OYSU Sweden Mudane Mahamed Amin Barkhadle oo kasoo qayb galayaashii u sharaxay ahmiyada shirka uu xambaarsan yahay & waxa loo qabtay.
Kadib waxuu kusoo dhaweeyay Gudoomiyaha jaaliyada Sweden Mudane Abdinasir Mahamed(Gadhweyne) oo dhalinta usoo jeediyay amaan & bogaadin wax qabadkooda tayada wanaagsan kuna guubaabiyay inay hawlahooda sii laba jibaaraan maadama ay yihiin shidaalka & enarjiga lagu xoraynayo Ogadenia. Sidoo kale waxaa cod baahiyaha lagusoo dhaweeyay Mudane Cabdulahi Colad oo marti sharaf ka ahaa goobta shirka kana yimid dalka Denmark ayaa asna kasoo jeediyay qudbad lagu diirsaday oo ku saabsan nidaamka ururnimo, waxa looga baahan yahay urur, waxa sababi kara habacsanan ku yimada ururka & siyaalaha looga hortagi karo waxa burburiya ururnimada.
Kadib Sidaanu horay usheegnay kulanka oo lagu dhisayay urur cusub oo lamagac baxay OYSU Järfälla ayaa lagu dhawaaqay masuuliyiintii xilka qaban lahaa, Masuuliyiinta ayaa kala ahaa 1. Xog-Haye, 2. Xog-Haynta ururka & 3. Hogaanka dhaqaalaha. Sikastaba ha ahaatee Dalka Sweden oo ay markii hore sitoosa uga hawl gali jireen ilaa 4-urur hoosaad ayeey hada kusoo biirtay OYSU Järfälla oola filayo inay wax yaala badan badali doonto insha-allaah.
Ugu dambayntii waxaa dardaaran qiima badan usoo jeediyay & guubaabo Xog-Hayaha Guud Mudane Mujaahid halkaasna ku macsalaameeyay dhamaan masuuliyiintii madasha fadhiday & xubnahii.
Isku soo wada duuboo kulankii ayaa kusoo gabagaboobay jawi wanaagsan oo ay farxadi ku dheehnayd.